Afarta kulan ee ugu fiican Pokémon ee loogu talagalay Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Ciyaaraha Android, Noticias, Pokémon Go
Pokémon waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dunida oo dhan. Ciyaarihii ugu horreeyay ee lagu sii daayo consoles'ka Game Boy si weyn ayaa loogu guuleystay, sidoo kale taxanaha telefishanka. Dhacdadani waxay heshay dhiirigelin weyn markii Pokémon Go loo sii daayay taleefannada Android. Cayaartu waxay noqotay guul aan horay loo arag oo ay qabsatay malaayiin isticmaaleyaal ah oo adduunka ku baahsan.
In kastoo ay jiraan cinwaano badan oo ka mid ah taxanahan caanka ah ee loo heli karo Android. Kadibna waxaan dib u eegeynaa iyaga waxaanan kuu dhaafi doonaa qaar ka mid ah cayaaraha ugu fiican Pokémon ee aan hadda u helno qalabka Android.
Waa xulasho ciyaaro leh astaamahan jilayaal ahaan, in kasta oo ay aad uga duwan yihiin midba midka kale. Marka mid kasta waxaa loogu talagalay dhagaystayaal kala duwan. In kasta oo ay dhammaantood ka tirsan yihiin caalamka Pokémon. Diyaar ma u tahay inaad ogaato cayaarahan?
1 Hoyga Ciyaaraha Pokémon
3 Pokémon TCG khadka tooska ah
Hoyga Ciyaaraha Pokémon
Waxaan ku bilaabaynaa kulankaan kan ugu yar guriga. Waa ciyaar aan ku helno garoonkan ciyaarta oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo pokémons ah Fikradda ciyaarta ayaa ah in carruurtu la falgeli karaan ciyaarta waqti kasta. Waxaan leenahay midabbo badan, koontaroolo fudud, buuq badan. Waxaas oo dhan waxaa loogu talagalay in lagu madadaaliyo oo lagu mashquuliyo carruurta inta ay isticmaalayaan. Wax badan oo kale ma dhacaan. Laakiin waxaa loogu talagalay niche suuq aad u cad.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. Intaas waxaa sii dheer, kama helno wax iibsi ama xayeysiin ah gudaheeda. Marka gabi ahaanba waa bilaash.
Developer: Shirkadda Pokémon Company International
Marka labaad, waxaan ka helnaa mid ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyay ee adduunka Pokémon. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu badan asal ah, quirky iyo xiiso leh in aan heli karno. Sidoo kale waa wax yar oo caqli gal ah, laakiin waa madadaalo wakhti kasta. Hawlgalkeeda dhib badan ma leh. Waa inaan tababaro Magikarp oo ka dhignaa mid aan faa'iido lahayn intii suurtagal ah. Marka la soo koobo, ha baran hawlo waxtar leh. Marka waa wax qosol badan oo aan macquul ahayn. Ku habboon inaad la joogtid haddii aad caajiso munaasabad kasta.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo aan ka dhex helno wax iibsi iyo xayeysiis. Waa iibsiyo gaari kara 38,99 euro.
Developer: Shirkadda Pokemon
Pokémon TCG khadka tooska ah
Waxaan sidoo kale leenahay ciyaar kaar ah oo ku dhex jira guud ahaan ballacyada ciyaaraha saga. Xaaladdan oo kale, waa ciyaar hawlgalkeedu la mid noqon doono ka ciyaaraha kale ee kaararka noocan ah. Marka waa inaan helnaa kaararka wanaagsan, ku tababbarannaa oo markaa awood u yeelan karnaa inaan wajahno isticmaaleyaasha kale ee ciyaarta gudaheeda dagaalladda. Maxaa intaa ka badan, ciyaarta ayaa ina siineysa xulashooyin habeyn ah, taas oo runtii ka dhigaysa mid farxad u leh dadka isticmaala ciyaarta. Waxay siinaysaa aragti ka duwan isku dhacyada u dhexeeya Pokémon.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo aan ka dhex helno wax iibsi iyo xayeysiis. Waa ciyaar freemium caadi ah oo macno leh.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan ku xiraynaa liiska cayaarta ugu caansan taxanaha. Ciyaarta oo kacaan ka ahayd Android, inkasta oo ay lumisay caannimadeedii iyadoo waqtigu si xawli ah ku socdo. In kasta oo dhacdooyinkii la abaabulay sanadkii hore ay umuuqdaan kuwo siiyay xoogaa nolol ah. Qalliinka ciyaarta waa la yaqaan, waa inaan soo qabsannaa dhammaan pokémons, kuwaas oo ka soo baxaya adduunka dhabta ah. Markaa waa inaad ka dhigtaa inay isbeddelaan oo ay tababaraan, marka lagu daro inaad la kulanto isticmaaleyaasha kale ee dagaalka. Waxay ku sii jirtaa runta sida cayaaraha asalka ah u shaqeeyaan, laakiin ku habboon waqtiyadan.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah. Iibsiyada noqon kara ilaa 109,99 euro. Qiimaha ugu xad dhaafka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Pokémon Go » Ciyaaraha ugu fiican Pokémon ee loogu talagalay Android
Daraasadaha Facebook ayaa bilaabaya nooc ka mid ah xayeysiinta adoo adeegsanaya rukumo